संयुक्त राज्य अमेरिका मा ठूलो ताल Absolut यात्रा
अमेरिकामा ठूलो तालहरू
क्यानाडा र संयुक्त राज्य अमेरिका बीचको सिमानामा large वटा ठूला तालहरू छन् जसले ठूल्ठूला इलाकामा प्रभुत्व जमाउँछन् र जहाँ पृथ्वीमा ताजा पानीको ठूलो जनसंख्या केन्द्रित छ।: मिशिगन, सुपीरियर, ओन्टारियो, ह्युरन र एरी। यद्यपि तिनीहरू बन्द समुद्रहरू जस्तै व्यवहार गर्छन्, तिनीहरूको पानी ताजा छ र पृथ्वीको भण्डारको एक पाँचौ भन्दा कम हुँदैन।
यी पाँच ठूला तालहरूले मीलको तटहरू, चट्टानहरू, टिब्बा, लाइटहाउसहरूको एउटा ठूलो भीड, टापुहरू जो तट र रिसोर्ट शहरहरूमा डट गर्दछ प्रस्ताव गर्दछ। यो आश्चर्यजनक होइन कि यसलाई "तेस्रो तट" भनिन्छ किनकि यी तालहरू जनावरहरूको प्रजातिहरूको एक असाधारण विविधताको वासस्थान हो। थप रूपमा, सबै किसिमका डु boats्गाहरू ताजा पानीको यी विशाल विस्तारहरूको माध्यमबाट यात्रा गर्दछन् र मछुवाहरू र कायाक प्रेमीहरूका लागि डुbo्गा, कार्गो स्टीमर, टग्स, इत्यादिसँग मिसाउन सामान्य छ।
अमेरिकामा पाँच ठूलो तालहरू भ्रमण गर्नु साहसिक छुट्टीको लागि उत्तम विचार हो। यदि यो तपाईंको केस हो र तपाईं तिनीहरूलाई भेट्न चाहनुहुन्छ भने, तब म प्रकृतिका यी आश्चर्य कार्यहरूको बारेमा बढी पत्ता लगाउनेछु।
1 ताल मिशिगन
2 ताल उच्च
3 ओन्टारियो ताल
4 ताल Huron
5 ताल erie
मिशिगन ताल संयुक्त राज्य अमेरिकाका पाँच ठूला तालहरू मध्ये एक हो तर यो केवल एक मात्र हो जुन पूर्ण रूपमा देश भित्र रहेको छ किनकि अन्य क्यानाडासँग बाँडिएका छन्। यसको वरिपरि विस्कॉन्सिन, इलिनोइस, इन्डियाना र मिशिगन राज्यहरू छन्, जुन तालको नामबाट नै हो।
यस तालको क्षेत्रफल 57.750 281० वर्ग किलोमीटर र गहिराई २ XNUMX१ मिटर छ। यो एक देश भित्रको सब भन्दा ठूलो ताल मानिन्छ र विश्वमा पाँचौं। यसको खण्ड 4.918, XNUMX १। घन किलोमिटर पानी छ र मिशिगन लेकले धेरै पार्क र समुद्र तटहरू सम्बोधन गर्दछ।
लगभग १२ करोड मानिसहरू यसको किनारमा बसोबास गर्छन्, जसमध्ये धेरै साना पर्यटक स्थानहरूमा छन् जो मिशिगन लेकले प्रस्ताव गर्दछ। तालको भ्रमणमा दिन खर्च गर्नु राम्रो विचार हो जुन बाहिर प्रकृतिमा रमाइलो गर्न सकिन्छ, आराम गर्नुहोस् र दिनचर्याबाट विच्छेदन गर्नुहोस्। तालिका पार गर्न डु very्गामा चढ्नु नै एक रमाइलो योजना हो। पछि साल्मन र ट्राउटमा धनी स्थानीय खाना बनाएर भन्दा राम्रो केही छैन।
इलिनोइ राज्यको मिशिगन तालको किनारमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शहरहरूमध्ये एक हो: शिकागो। हावा शहरको रूपमा परिचित, यो न्यू योर्क र लस एन्जलस पछि संयुक्त राज्य अमेरिकाको तेस्रो सर्वाधिक जनसंख्या भएको शहर हो।
यो एक आधुनिक र विश्वव्यापी शहर हो जुन १,१०० भन्दा बढी स्काईस्क्र्यापर्सहरूको घर छ। हाल सबैभन्दा अग्लो भवन विलिस टावर हो (पहिले सिअर्स टावर भनेर चिनिन्थ्यो), तर १ 1.100 २० को दशकमा यो रिग्ली बिल्डिंग थियो, जसको धरहरा सेभिलको गिरालडा पछि डिजाइन गरिएको थियो।
यस तालले मिनेसोटा, विस्कॉन्सिन, र मिशिगनको संयुक्त राज्यमा र ओन्टारियो क्यानाडाको छेउमा छ। ओजिब्वे जनजातिले यसलाई गिचिगामी भन्यो जसको अर्थ "ठूलो पानी" हो र यो विश्वको सबैभन्दा ठूलो ताजा पानी ताल हो। तपाईंलाई यसको प्रभावशाली आयामहरूको कल्पना दिन, ताल सुपीरियरमा अन्य सबै महान तालहरू र तीन थप एरी झील जस्तै मात्रा हुन्छ। यो संयुक्त राज्य अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो, सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा ठूलो ताल हो।
एक जिज्ञासाको रूपमा, ताल सुपीरियरमा आँधीबेहरीले meters मिटर भन्दा बढीको रेकर्ड तरंगहरू उत्पादन गर्दछ, तर meters मिटर भन्दा बढीको छाल रेकर्ड गरिएको छ। आश्चर्यजनक!
अर्कोतर्फ, यस ताल बीचमा धेरै टापुहरू छन् जसमध्ये सबैभन्दा ठूलो मिशिगन राज्यको रोयाल टापु हो। यसले बदलेमा अन्य तालहरू समावेश गर्दछ जुन टापुहरू समावेश गर्दछ। जे भए पनि, अन्य प्रसिद्ध ठूला ताल सुपीरियर टापुहरूमा ओन्टारियो प्रान्तको मिचिपिकोटेन टापु र विस्कन्सिन राज्यको मडलिन टापु समावेश छ।
यसको विपरीत, संयुक्त राज्य अमेरिकाको ग्रेट तालमा सबैभन्दा सानो ताल ओन्टारियो ताल हो। यो बाँकी तालहरू भन्दा पूर्वको पूर्वमा अवस्थित छ र क्यानाडा र संयुक्त राज्य अमेरिका दुबैमा पर्छ: उत्तरी भाग ओन्टारियो प्रान्तको र दक्षिणी भाग न्यू योर्क राज्यको लागि।
सुपीरियर लेकको जस्तै यसमा पनि धेरै टापुहरू छन्, सबैभन्दा ठूलो वोलफर टापु हो, सेन्ट लरेन्स नदीको प्रवेशद्वारमा किंग्स्टनको नजिक अवस्थित।
यदि हामी ओन्टारियो तालको वरिपरी जनसंख्या केन्द्रहरूको बारेमा कुरा गर्छौं भने, हामीले पत्ता लगायौं कि क्यानाडाली किनारको पश्चिमी किनारमा गोल्डन होर्शोइ भनिने ठूलो कन्फरेसन छ जुन लगभग people ० लाख मानिसहरू बस्ने गर्दछ र यसमा ह्यामिल्टन र टोरन्टो शहरहरू पर्छन्। अमेरिकी पक्षमा यसको तट मुख्यतया ग्रामीण छ र मोन्रो काउन्टी (न्यू योर्क) मा रोचेस्टर बाहेक।
ईन्डल्यान्ड, करीव kilometers० किलोमिटर टाढामा, हामी सिराकुज शहर भेट्टाउन सक्छौं र यो ताल नहरद्वारा जोडिएको छ। करीव २० लाख मानिसहरु अमेरिकी पक्षमा बस्छन्।
लेक ह्युरन संयुक्त राज्य अमेरिकाको अर्को ठूलो ताल हो, विशेष रूपमा आकारमा यो पाँच मध्ये दोस्रो ठूलो र ग्रहमा चौथो ठूलो हो। क्रोएशिया सबै भन्दा ठूलो! यो संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानडाको बीचमा अवस्थित छ, उत्तरी अमेरिकाको मध्य क्षेत्रमा र यसको सुन्दर परिदृश्यहरूको लागि विशेष रूपमा पर्यटकहरूले भ्रमण गर्नेहरू मध्ये एक हो।
लेक हरुन त्यो ठाउँ हो जुन धेरै अमेरिकीहरूले छुट्टीहरू खर्च गर्नका लागि छान्छन्। गर्मी महिनाहरूमा, स्थानीय प्रकृति र लाइटहाउस जस्ता झील ह्यरोनको नजिक केही ऐतिहासिक एन्क्लाभहरू पनि जान्न वरपरका वरिपरि टुरहरू आयोजना गरिन्छ। यी भ्रमणहरूले आगन्तुकहरूलाई यस ठाउँको ईतिहासको बारेमा अझ बढी सिक्न र विस्तृत रूपमा यसको प्राकृतिक खजाना जान्न अनुमति दिन्छ।
थप रूपमा, त्यहाँ पानी गतिविधिहरू जस्तै कायाकि or वा स्कूबा डाइभिंग पनि छन्। यहाँसम्म कि यस तालमा हजारौं टापुहरू मध्ये एक हुँदै पैदल यात्रा गर्दैछ। जब तिनीहरू सुलभ छन्, व्यक्ति उनीहरूलाई घेरामा राख्न प्रख्यात टर्निप जस्ता छन, तिनीहरू सबैमा सबैभन्दा फोटोजनिक शीर्षमा यसको सेतो पाइन वनको साथ।
जिज्ञासाको रूपमा, झुरन टापुले भरिएको छ, तिनीहरू मध्ये अधिकांश उत्तरमा क्यानाडाको सीमा सिमानामा अवस्थित छन्, ताजा पानीको तालमा यस ग्रहको सबैभन्दा ठूलो मानीटुलिन टापु हो।
ताल एरी संयुक्त राज्य अमेरिका र सबैभन्दा थोरै मा पाँच ठूलो तालहरू को दक्षिणी हो। यो क्यानाडामा ओन्टारियोको सिमानामा अवस्थित छ र अमेरिकाको पेन्सल्भेनिया, ओहायो, मिशिगन र न्यु योर्क राज्यहरूको सीमाको रूपमा कार्य गर्दछ।
यसको आकारको कारण (यसले लगभग २,,25.700०० वर्ग किलोमिटर ओगटेको छ), यो विश्वको तेह्रौं प्राकृतिक ताल मानिन्छ। पूर्ण रूपमा नेभिगेबल, यसको समुद्री सतह १ 173 मिटर र उचाइ १ meters मिटरको उचाईमा छ; यस हिसाबले यो समग्रमा ठूलो ताल हो।
यो पत्ता लगाइने महान तालहरू मध्ये अन्तिम थियो र फ्रान्सेली अन्वेषकहरूले यस क्षेत्रलाई बसोबास गर्ने एउटै नामको मूल जमात पछि यसलाई एरी लेक भन्ने नाम दिए।
अन्य तालहरू जस्तै एरी तालमा पनि धेरै टापुहरू छन्। जम्मा त्यहाँ चौबीस छन्, जसमध्ये नौ क्यानाडाको हुन्। केहि ठूला टापुहरू केल्लीहरू टापु, साउथ बास टापु वा जोसनसन टापु हुन्।
एक जिज्ञासाको रूपमा, एरी लेकको आफ्नै माइक्रोक्लीमेट छ, जसले फलफूल, तरकारी र दाखमद्य बनाउनको लागि दाखलाई बढाउँदै यस क्षेत्रलाई उर्वरा बनाउँछ। लेक एरी लेक इफेक्ट ब्लीफर्ड्सका लागि पनि लोकप्रिय छ जुन शहरको पूर्वी उपनगरहरूमा शेकर हाइट्सदेखि बफेलोसम्म कास्दछ। यो मौसमको अन्तमा र वसन्तको शुरुमा हुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » अमेरिकामा ठूलो तालहरू
कोलकाता, भारत को सबै भन्दा सुन्दर शहरहरु को बीच